Basaska dhiiga qaada oo kordhaya - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dad dhiig isaga shubaya basaska dhiiga qaada dhexdiisa. Foto: Malin Björk/Sveriges Radio
Basaska dhiiga qaada oo kordhaya
La daabacay torsdag 9 augusti 2012 kl 11.39
Maamulada caafimaadka gobolada dalka ayaa sii kordhinaya basaska ku rakiban yihiin qalabka dhiiga la isaga shubo si loo suura geliyo in dad badan ay yaboohaan dhiigooda waxaana tan iyo sanadkii la soo dhaafay kordhay basaskan.
Sanadkan iyo sanadkii la soo dhaafay gobolada Jönköping iyo Värmland ayaa sammeysatay basaskoodii ugu horreyay ee dhiiga qaada. Gobolada Östergötland iyo Skåne ayaa iyaguna kordhiyay tirada basaska iyaga oo sammeystay in ka badan hal bas.
Basaskan dhiiga qaada ayaa waxay keenaan keliya 30 000 litir oo ka mid ah dhiiga sanad walba loo baahan yahay ee gaaraya 225 000 litir hase yeeshee waxaa la filayaa in ay sii kordhaan tirada dhiiga ay soo xareeyaan basaskan.
Ann-Marie Andersson oo ah madaxa dhiig ku shubista ee cisbitaalka gobolka Jönköpings ayaa ku faraxsan basaska cusub ee ay heleen, sida ay u sheegtay ekot.
(-Waa arrin ina dhiira gelineysa in aan helno jawaab habboon. Waxaan hadda heysanaa shirkad tilifoono direysa oo sheegeysa meesha a aan u baahanyahay in aan tagno oo dibeda u istaagno dadka)
Gobolka Blekinge ayaa ah gobol ay ka jirto dhiig yari waxayna dhaqaatiirta gobolkaasi ay aad u rabi lahaayeen basaskan dhiiga ka aruuriya dadka yaboohaya in ay dhiig shubaan sida uu sheegay dhaqtar Meta Bratt oo ka tirsan cisbitaalka gobolkaasi.